सेक्स गर्दा चाडै विर्यस्खलन हुने समस्या छ ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
सेक्स गर्दा चाडै विर्यस्खलन हुने समस्या छ ?
प्रकाशित मिति ८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १५:३५ लेखक nepali janta
काठमाडौं । यौनआनन्द पाउने उपायहरूमध्ये यौन अङ्गको घर्षण नै प्रमुख हो । यौनसम्पर्कमा यौनाङ्गहरू नै एक-आपसमा घर्षण गराइन्छ । यस्तो घर्षण अरू कसैको यौन अङ्गमा गराउँदा मात्र होइन, हातले गराउँदा पनि आनन्द आउँछ।
सिद्वान्ततः यौनसम्पर्क गर्दा र हस्तमैथुन गर्दा यौन आनन्द पाउने प्रक्रिया उस्तै हो । त्यसैले सम्भोग गर्दा हानि नहुने र हस्तमैथुन गर्दा हानि हुने कुरा भन्न मिलेन । कतिपय गलत धारणा वा भ्रमहरू व्याप्त भए पनि हस्तमैथुनले स्वास्थ्यसम्बन्धी हानि-नोक्सानी गर्दैन ।
युएईमा गैरकानुनी रुपमा बसेकालाई आममाफी लागू, नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा आउन आग्रह
काठमाडौँ । युएईले विभिन्न कारणले गैरकानुनी रुपमा बसिरहेका विदेशी नागरिकलाई तीन महिनाको आममाफीको समय दिएको छ । आममाफी बुधबारदेखि…
घट्याे पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ
काठमाडौं । पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटेको छ । हवाई ईन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको हकमा खुद्रा…
स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई कुटनीतिक भेटघाटमा ‘लगाम’, भेट गर्नुअघि परराष्ट्रको स्वीकृति अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले कुटनीतिक भेटघाटलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास…
एक वर्षमा १८ सय प्रहरी कर्मचारी कारबाहीमा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा कार्यरत् जवानदेखि अधिकृतसम्मका १८ सय जना गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कारबाहीमा परेका छन् ।